rudra prasad bhattarai – Everest Dainik – News from Nepal
Tag: rudra prasad bhattarai
काठमाडौं, भदौ २४ । नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघले आज शनिबार पनि बालुवाटारमा आन्दोलन जारी छ । करिव डेढ महिनादेखि करारको ...
राहतदेखि आहतसम्मका मतहरू
नेपालमा चुनाव ताका छुट्टै निकायले अनुसन्धान गरेको सायदै होला, चुनाव जीत हारको प्रमुखता के कुराले पायो भनेर । तर, परिणाम ...
रूद्रप्रसाद भट्टराई२०७४, ४ बैशाख सोमबार
नियम जनताकै पक्षमा भएपनि आफूले पाएको सूचना सम्वन्धित निकायको जवानसम्म राम्ररी पुग्न सकेको छ की छैन चिन्ताको विषय हो । तर, हरन बजाएकै भरमा उम्कने वातावरणमा सवारी साधनकर्ता भएमा यो नियम धज्जीमा उड्ने ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ ।
रूद्रप्रसाद भट्टराई२०७३, ५ फाल्गुन बिहीबार
स्ववियु चुनावमा विद्यार्थी संगठनका नारा मात्रै गज्जब, कार्यान्वयन शून्य !
संविधान कार्यान्वयका लागि स्ववियू निर्वाचन मार्फत जनमत प्रकट गरौँ ! गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्ति र शैक्षिक विकृतिको अन्त्यको लागि नेविसंघलाई मतदान ...